အလုပ်နားပေမယ့် ချစ်ဇနီး ခံတွင်းတွေ့စေဖို့ ဟင်းလျာတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နေရလို့ မအားရဘူးဆိုတဲ့ ခင်လှိုင် - Cele Connections
နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော်၊ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခင်လှိုင်က အနုပညာသက်တမ်း နှစ် (၃၀) ကျော်အတွင်း ကျရာဇာတ်ရုပ်အပေါ်မှာ တာဝန်ကျေပွန်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ ပက်သတ်လာရင် အင်မတန်ကို ထူးချွန်တဲ့ ခင်လှိုင်က ကံတရားက မျက်နှာသာမပေးသေးတာကြောင့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ ခင်လှိုင်က အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ခင်လှိုင်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကတော့ “ဆိုးပေ” ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးကို ရိုက်ကူးပြီး အနားယူနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်နားပေမယ့် လူမအားတဲ့ခင်လှိုင်က “အလုပ်နားပေမယ့် ကျွန်တော်မအားပါ ခင်ဗျာ။ မငွေသိမ်း လျှာအရင်းမြက်စေဖို့ ဘာဟင်းချက်မယ်ထင်ပါသလဲ???” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဟင်းချက်နေပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေပေးလာပါတယ်။
ခင်လှိုင်ကတော့ အလုပ်နားပေမယ့် ချစ်ဇနီး ခံတွင်းတွေ့စေဖို့ ဟင်းလျာတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နေရလို့ မအားမလပ်ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်တို့ မိသားစုလေးကတော့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် ဂရုစိုက်ကြတာကြောင့် အခုလိုပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပျနားပမေယျ့ ခဈြဇနီး ခံတှငျးတှစေ့ဖေို့ ဟငျးလြာတှကေို ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျနရေလို့ မအားရဘူးဆိုတဲ့ ခငျလှိုငျ
နိုငျငံကြျော လူရှငျတျော၊ ဇာတျပို့ ဇာတျရံတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခငျလှိုငျက အနုပညာသကျတမျး နှဈ (၃၀) ကြျောအတှငျး ကရြာဇာတျရုပျအပျေါမှာ တာဝနျကပြှေနျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာနဲ့ ပကျသတျလာရငျ အငျမတနျကို ထူးခြှနျတဲ့ ခငျလှိုငျက ကံတရားက မကျြနှာသာမပေးသေးတာကွောငျ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုကွီးနဲ့ အကွိမျကွိမျလှဲခြျောနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ ခငျလှိုငျက အောငျမွငျမှုအရှိဆုံး ဇာတျပို့ ဇာတျရံ သရုပျဆောငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာ ကိုယျတိုငျ ဒါရိုကျတာလုပျပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ ရိုကျကူးနတေဲ့ ခငျလှိုငျက ပွီးခဲ့တဲ့ရကျသတ်တပတျကတော့ “ဆိုးပေ” ဇာတျလမျးတှဲကွီးကို ရိုကျကူးပွီး အနားယူနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အလုပျနားပမေယျ့ လူမအားတဲ့ခငျလှိုငျက “အလုပျနားပမေယျ့ ကြှနျတျောမအားပါ ခငျဗြာ။ မငှသေိမျး လြှာအရငျးမွကျစဖေို့ ဘာဟငျးခကျြမယျထငျပါသလဲ???” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဟငျးခကျြနပေုံတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝပေေးလာပါတယျ။
ခငျလှိုငျကတော့ အလုပျနားပမေယျ့ ခဈြဇနီး ခံတှငျးတှစေ့ဖေို့ ဟငျးလြာတှကေို ကိုယျတိုငျခကျြပွုတျနရေလို့ မအားမလပျဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျလှိုငျတို့ မိသားစုလေးကတော့ တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျ ဂရုစိုကျကွတာကွောငျ့ အခုလိုပဲ ပြျောရှငျဖှယျကောငျးတဲ့ ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။